လူတွေကို အချိန်ပြည့် ဒုက္ခပေးနေသော အကောင်သုံးကောင်ရှိသည်. . လောဘကောင်ရယ်၊ဒေါသကောင်ရယ် မောဟကောင်ရယ် ဒီသုံးကောင်ပါ. . ဒီသုံးကောင်ကို လုံးဝဥသာုံ ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ မလွယ်၊ တကယ်လုပ်ကြည့်လေ အဟုတ်သိလာလေ၊ ဒီသုံးကောင်မှာ ဘယ်ကောင် အဆိုးဆုံးနည်း . သုံးကောင်စလုံး ဆိုးပါသည်. .
လူတိုင်းလိုလို ပထမဆုံး စတွေ့ရတတ်တာဟာ လောဘကောင်. . . နေရာတိုင်းမှာ လောဘကောင်ရှိသည်. . အလှူအိမ်မှာ မုန့်ဟင်းခါး စားတာကအစ. . လောဘကောင်ရှိသည် . တစ်ပန်းကန်၊ နှစ်ပန်းကန်စားရုံဖြင့် ဗိုက်ဝပါလျက် (အလကားရလျှင် ၀င်သလောက်စားမည်ဆိုပြီး) မဆန့်မပြဲစားခြင်းသည် လောဘဖြစ်သည်. . လောဘကောင်၏ သွေးဆောင်ရာသို့ ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်. . .
ကိုက်တတ်သောခွေးကိုထိန်းရတာကမှ လွယ်လိမ့်အုံးမည်. . . ဒီသုံးကောင်ကို ထိန်းရတာ မလွယ်ပါ. . .
ဂုရုကြီး ရေးလိုက်ရင် . . . "ဟိုက်ရှာလပတ်ရည်နဲ့ သွတ်သွတ်တို့၊ ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါးတို့ ဒါတွေချည်းပဲ ဂုရုကြီးက ငပေါကြီးပဲ " နောက်သည်ကိုသိပါလျက်နဲ့ ဒေါသထောင်းကနဲထွက်သွားတယ်...
ဒေါသ သိလည်းသိလျက် ထိန်းလည်း ထိန်းနေတဲ့ကြားက ဒေါသသံပါသွားသည်. . ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ပိုကြီးမသွားအောင် ထိန်းလိုက်ရသည်. . .
မောဟဆိုတဲ့ အကောင်လည်း မထူးပါ. . လောဘနဲ့ဒေါသနှင့် အတူတူပါ့ ဂုရုကွေး တို့သည် လည်း အသက်အရွယ်အရ တရားဓမ္မတွေလိုက်စားရင်း နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား တွေနာရင်း လောဘကို သတ်ရင်း ခေါင်းထောင်လိုက်ရင်း ဒေါသကိုထိန်းလိုက်၊ ဒေါသကြိုးက ပြတ်ထွက်ပြီး ကိုယ့်ပြန်လျှာထုတ်ပြလိုက်၊ သတ်မရ ထိန်းမရ ကလယ်ကလယ်ဖြစ်နေကြသည်. . .
ဒီလိုပဲ စိတ်လျှော့လိုက်ရမလား ၊ လောဘ၊ ဒေါသ မောဟ လူဆိုးသုံးကောင်ကို လွှတ်ထားလိုက်ရမလား . ထိန်းနေတဲ့ကြားကပင် ဆိုးနေတာ လွှတ်ထားလျှင် ပိုဆိုးမည်.. ထိန်းမရတဲ့ ထိုသုံးကောင်ကို လုံးဝချုပ်ငြိမ်းအောင် မသတ်နိုင်သေးသည့်တိုင် ပါးလျားအောင် နည်းပါးအောင် လုပ်ရတော့မည် မဟုတ်ပါလား . .
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, May 09, 2009
မိုးခါး May 9, 2009 at 3:38 PM
နေရာတကာ ဒီသုံးကောင် ရှုပ်ကိုရှုပ်တယ် .. :P
နေမင်းသံစဉ် May 9, 2009 at 3:46 PM
ဟုတ်ပ အမရေ..၊ဘယ်လိုမှ ကို ထိန်းလို့မရသေးဘူး၊
နေစိုးနိုင် May 9, 2009 at 4:13 PM
မထိမ်းဘဲ ထားတာ ကြာတော့
သူတို့ကိုတောင် တော် တော် ချစ်တတ်နေပြီ
ဒါကိုပဲ လူမိုက်လို့ ခေါ်မယ်ထင်တယ်နော်
kokomaung.uk May 9, 2009 at 6:49 PM
ဟုတ်တယ် ပန်းကဗျာရေ... ဒီသုံးကောင် တော်တော်ဆိုးတယ်။ ထိန်းရ ခက်မှ ခက်။
မြစ်ကျိုးအင်း May 10, 2009 at 1:49 AM
ဒီသုံးကောင်ကို မကောင်းမှန်းသိပေမယ့်လည်း ဖယ်ခွါလို့မရနိင်သေးပါဘူး..
ကြယ်ပြာ May 10, 2009 at 4:21 PM
အင်း ... ဒီသုံးကောင်ကို ထိန်းနေတုန်းပဲ ... အကုန်တော့ရသေးဘူး .. .တခါတခါမနည်းထိန်းရတယ် ...
အိမ် May 10, 2009 at 6:58 PM
ဟုတ်ပါ့ဗျာ... ထိန်းမရတာတော့ ပြောမနေနဲ့
အဲဒီ၃ကောင် အတော်ဆိုးတာဗျ..။ သူတို့လိုပဲ
ဆိုတော့ သမုဒ္ဒရာ ၀မ်းတထွာ ဆိုတာကြီးပဲပေါ့။
မောင်ကောင်း May 10, 2009 at 7:17 PM
ထိန်းမရတဲ့ သုံးကောင်.. မှတ်သားသွားပါတယ်အမ..
ကျနော်တော့.. ထိန်းမရတဲ့သုံးကောင်ကို ကြိုးနဲ့ချီပြီး ဟိုးအဝေးဆုံးကို နွှင့်ပြစ်လိုက်ချင်တယ်... အမလည်းနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ကြိုးစားထိန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...
ဖြိုးဇာနည် May 11, 2009 at 12:12 AM
ဝလုံးဝိုင်းဝိုင်း May 13, 2009 at 8:28 AM
အဲဒီ အကြီး သုံးကောင်ရဲ့ အောက်မှာ အငယ်တစ်ကောင် ကျန်သေးတယ်ဗျ။ သူတို့လေးယောက် တဖွဲ့တည်း။ သူက အငယ်ဆုံး ဆိုတော့ အဆိုးဆုံးးပဲ။ တော်တော် ညှို့ငင်အားပြင်းပြီး လိုက်လျောပေးရတာ များတယ်။ “ဆန္ဒ”...။
ဖိုးဂျယ် May 14, 2009 at 10:31 PM
ဟုတ်ပါ့ဗျာ ဒီသုံးကောင်က ရှုပ်ကို ရှုပ်တယ်